HORDHAC : Real Madrid VS Celta Vigo ? xaalka Madrid sidee ayuu noqon doonaa xili caawa Zidan uu hogaamin doono kulankii ugu horeyey tan iyo soo laabshadiisa – Gool FM
HORDHAC : Real Madrid VS Celta Vigo ? xaalka Madrid sidee ayuu noqon doonaa xili caawa Zidan uu hogaamin doono kulankii ugu horeyey tan iyo soo laabshadiisa
( La Liga ) 16 Marso 2019 Macalin Zinedine Zidane’ ayaa caawa kulankiisii ugu horeyey dib u hogaamin doono kooxda Real Madriid oo uu dib ugu soo laabtay waxa ayna garoonkooda ku soo dhaweenayaan kooxda Celta Vigo kulan ka tirsan horyaalka .
Madrid waxa ay bartanka kaga jirtaa xaaldedii ugu xumaa ee bilowga fasal ciyareed iyaga oo isaga haray tartanka Champions League sidoo kalana booska sedexaad ka fadhiya kala sareenta horyaalka .
Sergio Ramos ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa kaddib ganaax uu ku maqnaa kulankii ugu dambyeye ee horyaalka waxa uu hogaamin doonaa safka Macalin Zidan kualnkiisa ugu horeeya .
Marcelo oo ku guda jira xili ciyaareed aad u xun madam uu uu lumiyey booskii intii shaqa maamulka uu hayey macalin Santiago Solari. Zidane ayaa doonaya in uu dib u soo celiyo awoodii iyo kalsoonidii laacibka reer barazil.
Toni Kroos ayaa hogaamin doono khadka dhexe wallow uu ganaax kulankan ku seegayo Casemiro waxaana booskiisa badali doono midkooda xidigaha Federico Valverde iyo Dani Ceballos .
Keylor Navas ayaa ah dooqa koowaad ee macalin Zidane, lkn macalinka reer farance ayaan hadda diyaar u aheyn in isbadal uu ku sameeyo dhanka goosha balse waxa furmi doono tartan u dhexeen doona labada gool haye .
Iago Aspas ayaa la sheegaya in uu garoomada ka mqanaan doono inta ka harsan bishan arinkaas oo dhabr jab ku aha kooxda Celta Vigo madaama uu muhiim u ayahay kooxda .
Kaliaya ma ahan Aspas waxaa sidoo kale Celta Vigo ka maqan kulankan kabtankooda Hugo Mallo kaas oo kaualnka caawa ee Real Madrid ganaax ku seegaya.
Kulanka : Real madrid VS Celta Vigo ( La Liga )
Goobta : Santiago Bernabeu
Goorta : 6:15 oo fiidnimo
Garsoorka :Juan Martinez Munuera (Spain)
Ral Madrid ayaa guul daro la’an ah 9-kii kulan ee ugu dambeyey oo ay la ciyaarto kooxda Celta Vigo horyaalka Spain ee La Liga ( 8-guul iyo 1-bareejo)
Los Balncos ayaa badineysay lixdii kulan ee ugu dambeyey ee horyaalka oo ay garoonkeeda kula ciyaarto kooxda Celta Vigo kaddib markii ay qasareen labo kuan oo ka horeeyey .Cad-cadka ayaa dhalineysay gool 26-kii kulan ee ugu dambeyey ee ay garoonkeeda ku qaabisho Celta Vigo , markii ugu dambeyey ee ay ku guul dareesatay in wax gool ah dhalin weydo waxa uu ahaabl sandkii 1977.
Kooxda Celta Vigo ayaa guul la’an ah lixdii kulan ee ugu dambeyey ee ay ku soo ciyaarto banaanka kulamada horyaalka ( 1-bareejo iyo 5-qasaaro ) waxaana xusid mudan in labadii kulan ee ugu dambeyey marna aysan dhalin gool .
Real Madrid ayaa qasaartay Afartii kulan ee ugu dambeyey oo ay ku ciyaarto garoonkeeda dhamaad tartamada balse marna ma dhicin in tariikhdooda laga badiyo shan kulan oo xiriir ah .
Celta Vigo ayaa dhalineysay goolka koowaad ee ciyaarta ilaa iyo inta u dhaxeysa 18-daqiiqo bilowga hore ee ciyaarta afartii kulan ee ugu dambeyey ee ay ku ciyaarto meel ka baxsan garoonkeeda .
David Moyes oo falanqeeyay kulanka dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Barcelona
Waa maxay sababta Chelsea ku qasbeysa iney iska iibiso Eden Hazard iyagoo qarka u saaran in laga ganaaxo suuqa kala iibsiga laba waqti?